Vaovao - Karazana foibe fanodinana axis dimy
Ny ankamaroan'ireo ivon-toerana famolavolana axis dimy dia mandray rafitra 3 + 2, izany hoe, XYZ famaky mihetsika telo miampy roa amin'ireo famaky telo an'ny ABC mihodina manodidina ny axis XYZ. Amin'ny lafiny lehibe dia misy ny kyzab, xyzac ary xyzbc. Araka ny endrika mitambatra amin'ireo famaky roa mihodina, dia azo zaraina ho telo karazana ivon-toeran'ny fametahana axis dimy: karazana latabatra rotary roa, latabatra misy karazana lohan-doha, ary karazana lohan-doha avo roa heny. 1: Ivon-toeran'ny milina axis dimy misy firafitra mihodina:
A-axis + c-axis firafitra mihodina roa, ny latabatra dia afaka mihodina manodidina ny axis x, izay axis. Ny afovoan'ny latabatra dia afaka mihodina 360 degre manodidina ny axe Z, izay ny axis c. Miaraka amin'ny fitambaran'ny famaky roa an'ny AC, raha tsy azo zahana ny faritra ambany amin'ny sangan'asa dia azo zahana ireo faritra dimy hafa. Ny tombony an'ity milina ity dia ny firafitry ny spindle dia tsotra sy henjana, ary ambany ny vidiny, saingy voafetra kosa ny fahaiza-mitondra amin'ny latabatra.
Ity karazana foibe famolavolana fifandraisana axis dimy ity dia misy axis xyzbc. Ny spindle-n'ny ivon-toeran'ny milina fampifandraisana axis dimy dia malefaka indrindra, ary ny faritry ny toeram-pivarotana dia tsy voafetra, saingy sarotra ny firafitry ny spindle ary lafo ny vidiny.
3: Ivon-toeran'ny fametahana axis dimy miaraka amin'ny firafitry ny lohany roa:
Ny fahamendrehana avo lenta amin'ny spindle dia voavaha amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny tavy familiana herinaratra avo. Ny firafitry ny masinina manontolo dia karazana varavarana.
Fotoana fandefasana: Oct-12-2020